एनआरएनएलाई अगाडि बढाउने अनुभव र भिजनसहित आएको छु-डा.हेमराज शर्मा
एनआरएनएलाई अगाडि बढाउने अनुभव र भिजनसहित आएको छु–डा.हेमराज शर्मा
बेलायतस्थित लिभरपुल विश्वविद्यालयमा भौतिक शास्त्रका प्राध्यापक तथा गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ विधानको खाका र नियमावलीका मस्यौदाकार समेत रहेका गैरआवासीय नेपाली संघका सल्लाहकार तथा आगामी २०१९–२०२१ कार्यकालका लागि महासचिवका लागि उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।
उनै डा. हेमराज शर्मासंग आगामी एनआरएनएको चुनाबी अभियानबारे गरिएको कुराकानी
अहिलेसम्म एनआरएन अभियानमा आर्जन गरेको अनुभबबारे बताई दिनुहोस न ?
म यो अभियानमा शुरु देखिने छु । २००५ मा जापानको महासचिब हुँदै दुई कार्यकाल आइसिसि सदस्य भएँ । त्यसपछि जिबा लामिछानेजी अध्यक्ष हुँदा म प्रबक्ता थिएँ । र त्यसपछिको तीन कार्यकाल बिधान समितिको संयोजक रहेको छु । पहिलो बिज्ञ सम्मेलनमा कुमारजीसंग संयोजकको भूमिका निभाउने अवसर पनि मिल्यो । एनआरएनएका धेरै गतिविधिमा भाग पनि लिदै आएको छु । एनआरएनएलाई अब कसरि र कुन मोडबाट लैजान सकिन्छ भन्ने मसँग भिजन र अनुभब पनि छ । त्यसैले अहिले म यो संगठनको महासचिबको उमेद्वारको रुपमा आँफुलाई उभ्याइरहेको छु ।
तपाइँ यो पटकको महासचिबको उमेद्ववार पक्का हो नि ?
मेरो अनुभब र मैले संस्थामा गर्नसक्ने दृष्टिकोण चाहि यहि पदबाट गर्न सकिन्छ भन्ने कुराबारे धेरै सोच बिचार गरेर नै म यस पदको दाबि गरेको हुँ ।
महासचिबको दावेदार जानकी गुरुङलाई कसरि ब्यबस्थापन गर्ने सोच बनाउनु भएको छ ? युरोपबाट दुई जना लड्दा अलिक गलत संदेश त जादैन न ?
जो सचिब हुनुहुन्छ महासचिबमा जानु र उपाध्यक्षमा हुनेले अध्यक्षको दाबि गर्नु स्वभाबि नै हो । उहाँले पनि लामो समयदेखि संस्थामा योगदान दिदै आउनुभएको छ । मैले कस्तो परिस्थिति देखेको छु भने अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा खेरि यसमा सबै जनालाई अट्ने ठाउँ पनि छ र अलिकति प्रयास गर्ने हो भने सबै सहकर्मीहरुलाई संस्थामा अटाएर र सहमति गरेर जान सकिने प्रवल सम्भावना देखेको छु । र मेरो जोड पनि अध्यक्ष लगायत सबै पदमा सहमति होस् भन्ने नै रहन्छ । त्यो बाताबरण बनाउन म आँफै पनि लागेको छु र अग्रज अभियन्ताहरु पनि लाग्नुभएको छ । यहाँ बाहिर मिडियाका साथीहरुले पनि आफ्नो स्थानबाट सहमतिको लागि दवाब सृजना गर्दिनु होला ।
सहमतिको सम्भाबना कत्तिको छ ?
दक्षता, योग्यता,योगदानको आधारमा र संस्थालाई केन्द्रमा राखेर हेर्ने,सोच्ने हो भने देखि सहमतिको सम्भावना रहन्छ । पुरै पदमा चाहि निर्वाचन हुँदैन भन्न सकिंदैन किनभने शेष घलेजी जस्तो दह्रो उमेद्ववारले त चुनाब लडेर आउनु पर्ने स्थिति रह्य्यो । चुनाब हुन्न भन्न खोजेको त हैन तर एउटा सहमतिको टिम बन्न सक्ने सम्भाबना चाहि मैले प्रवल देखेको छु ।
कुमार जी र कुलाजी दुवै अध्यक्षको उमेद्वार बन्ने सम्भावना देखियो तपाइले कुलजीलाई के भन्न चाहनु हुन्छ ?
हामीले संस्थामा ठूलो ठूलो अफ्ठ्यारा पनि भोग्दै आएका छौं बिगतमा चाहि। एकचोटी चुनाबमा यस्ता कुराहरु आउछन् । उहाँहरु दुवै जना वा अरु पदमा भएकाहरु सबैले संस्थालाई केन्द्रमा राखेर एकचोटि सोचौं । चुनाब जित्नु मात्रै पनि ठूलो कुरा हैन । चुनाब जितिसकेपछि भोलि कसरी हाँक्ने,काम गर्ने र नयाँ परिस्थितिमा कसरि अगाडी बढाउने भन्ने कुरा चाहिं ठूलो हो । बाहिरबाट सहयोग चाहिन्छ किनभने अध्यक्षको टिममा भएर मात्रै टिमले गर्ने काम हैन, बाताबरण बनाउनु पर्छ । हामीले चुनाब जित्नलाई मात्रै हैन चुनाब जितेपछि कसरि काम गर्ने भन्ने कुरालाई संग संगै सोच्नुपर्छ । अहिले आँफू–आँफूमा बिबाद गरेर सहमति हुने सम्भावना हुँदा हुँदै पनि त्यसलाई बढी छलफलमा नल्याइकन चुनाबमा होमिदाखेरि सफल भएर जानेलाई पनि काम गर्न असजिलो हुन्छ असफल हुने साथीहरु करिब करिब एनआरएनएमा उहाँहरुको यात्रा अन्त्य हुने सम्भाबना म देख्छु ।
कुमारजी दुइपटक उपाध्यक्ष हुनु भो भने अझ एकपटक कुलजी उपाध्यक्षमा बसिदिदा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने आसय हो तपाइको ?
ब्यक्तिगत रुपमा कसैलाई पनि केहि नभनौ तर अध्यक्षको मात्रै कुरा छैन यहाँ उपाध्यक्षको पनि कुरा छ । महासचिबको कुरा छ । सबैले संस्थालाई केन्द्रमा राखेर आपसी सहमतिबाट जाँदा एकमुष्ठ रुपमा सबैलाई राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो ।
तपाइको अगाडिका महासचिबहरुको कार्यक्षमताबारे केहि गुनासो छ ? अहिलेसम्मका महासचिबले गर्न नसकेको र ’म भए त्यो गर्ने थिएँ उहाँहरुले गर्न सक्नु भएन’ भन्ने कुनै त्यस्तो असंतुष्टि छ ?
जुन जुन काल खण्डमा जो–जो महासचिब हुनु भो,उहाँहरुले सफल रुपमै आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको जस्तो लाग्छ । हाम्रो जस्तो डाइनामिक संस्था भनेको एक कार्यकालमा एक किसिमको एजेन्डा फोकस गर्नु पर्ने हुन्छ भने अर्को कार्यकालामा अर्का एजेन्डामा फोकस हुनु पर्छ । तर, मैले देखेको हाम्रो अहिले भवन भट्टले भन्या जस्तै एनआरएन ’भर्सन टू’ मा पुगेको छ । अब योङ्ग जेनेरेशनमा संस्था आएको छ । बिशेस परिस्थितिमा दर्ता पनि भैसक्यो, काठमाडौँमा घर पनि भैसक्यो, दोहोरो नागरिकताका कुराहरु र इनभेष्टमेन्टका कुराहरु पनि सर्टेन लेभलमा एड्रेस भैराखेको अबस्थामा यो उर्जालाई हामीले कसरि फलदायी बनाउने भनेर नयाँ सोँच,नयाँ ढङ्ग,नयाँ किसिमले जानु पर्ने आबस्यकता छ । त्यो परिस्थितिको आंकलन मैले गरेको छु । र अब आउने कार्यकालमा चाहिं म स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ आउने छु र यो वोर्किंग प्लान छ । दुई बर्षको,यसो गरौला उसो गरौला हैनकी यसरि गर्न सकिन्छ भन्ने कार्य योजनाका साथमा म आउंछु । र अब अहिले आकांक्षी अध्यक्षज्युहरु नै वा हामी आँफै बिचकोले नै उमेद्वारी दिदै हिड्ने र घोषणापत्र दिदै हिड्दा सहकार्य र सहमतिमा असर गर्न सक्छ भनेर खालि हामीले हाम्रो इन्ट्रेष्ट मात्रै देखाएका छौं । अध्यक्षमा एउटा टुंगो लाइसके पछि चाहि मेरो आफ्नो कन्सेप्ट प्लान र दृष्टिकोणको साथ म अगाडी आउनेछु ।
एनआरएनए नेतृत्वकर्ता आँफै लगानीको लागि प्रोजेक्ट बोकेर हिड्नु भएको छ ? यो संस्था लगानी गर्ने संस्था हो कि लगानीको लागि उत्प्रेरणा जगाउने संस्था ?
यो संस्था लगानीको वाताबरण गराउन उत्प्रेरणा जगाउने पनि हो तर कतिपय अबस्थामा एनआरएनएले इन्भेष्ट गरेको छ अफिसियल्ली। यी जे भैरहेका छन, त्यो तात्कालिक कार्यसमितिले जान्ने कुरा हो । जुन जुन इडोर्स गरेको छ,त्यसलाई एनआरएनको अफिसियल प्लाटफर्म प्रयोग चाहि गर्नु पर्छ । तर, अरु कुरा छोडेर लगानी मात्रै गर्छु वा गर्नुस भन्ने कुरा अलिक मिल्ला जस्तो लाग्दैन । कमसेकम नेतृत्वमा बसेका लिडरसिप उहाँहरुले सबै क्षेत्रकालाई ईक्येल अपर्चुनिटि दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हैन,यो नेटवोर्क बनायौं, त्यसलाई लगानीको लागि पनि प्रयोग नगर्ने, भाषा साहित्यको प्रबर्धनको लागि पनि प्रयोग नगर्ने हो भने संस्था बनाएको औचित्य हुँदैन । मैले हिजो क्षेत्री समाजको कार्यक्रममा पनि भनेको छु एनआरएनएमा लाग्नु भएको छ, एनआरएनको मेम्बरले के पायो ? उसले पनि अपनत्व फिल गर्न सक्नु पर्छ । त्यसको लागि स्पष्ट र पारदर्शी दृष्टिकोण आउनु पर्छ ।
संघको नीति अहिले एउटा के छ भने संघको प्लेटफर्म प्रयोग गरेर जतिपनि इन्भेष्टमेन्टका कुराहरु आएका छन, संस्थाको कस्तो खालको उत्तरदायित्व हुने ? एनआरएनएको प्लाटफार्म प्रयोग गरेर प्रोजेक्ट फेल भयो भने त्यसको जिम्मेवारी एनआरएनएले लिनुपर्ने हुन्छ । सफल भयो भनेपनि त्यसको प्रतिफल कहीं न केहि एनआरएनएले पाउनु पर्छ । यसरि संस्थागत रुपमा संगठनलाई सहयोग हुने बाताबरण बनाउनु जरुरि छ । अहिलेसम्म त्यो हुन सकिरहेको देखिदैन किनकि त्यस्तो खालको नीतिगत अबधारणा आएको चाहि छैन । म महासचिब भैसकेपछि यी लगायत थुप्रै कुराहरु नीतिगत रुपमा ल्याउन जरुरि देखेको छु । नीति नभैकन यसो गरेनौ उसो गरेनौ भन्न हामी आँफैलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ ।
अन्त्यमा डायस्पोराको नेपाललाई के भन्नु हुन्छ ?
गैह्र आबासिय नेपाली संघमा मेरो योगदान तपाईहरु सबैले छर्लंग देख्नु भएकै छ । म यो संस्थामा लाभ लिन लागेको हैन दिनको लागि हो । म अन्तरआत्मादेखि लागेको हुँ । मेरो योग्यता,क्षमता र उत्तरदायित्व महासचिब भएर आएपछि अझ पारदर्शीरुपमा देख्न सक्नु हुनेछ । सम्पूर्ण प्रबासमा बस्नु भएका नेपालीहरुलाई मेरो यहि अनुरोध हो कि संस्थालाई प्रयोग गर्ने भन्दा संस्थागत हितको लागि केहि दिन सक्ने योग्य मान्छे छान्दिनु होला । यो संस्थामा धेरै अग्रज र अभियन्ताहरुको अथक मेहनत र पसिना बगेको छ । त्यसलाई सम्मान गरिदिनु होला। खराब प्रवृति र असल प्रवृतिको मुल्यांकन गर्दै कतै झुकाब नराखी योगदान र क्षमताको समिक्षा गरिदिनु होला । बिबेक भन्दा ठुलो दुनियामा केहि छैन । त्यहि बिबेकको सहि ठाउँमा प्रयोग गरिदिनु भयो भने एनआरएनएको साख बच्ने मात्र हैन अझ उँचो हुने छ ।
प्रस्तुति : डिल्लीराम अम्माई